Channel Myanmar Update ( မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ စုဝေးရာ ): Tale From Earth Sea (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး Channel Myanmar Update ( မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ စုဝေးရာ )
Tale From Earth Sea (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb - 6.5/10
အခု ဇာတ်ကားလေးကတော့ နာမည်ကြီး Studio Ghibli ကထွက်ရှိတဲ့ anime ကားဟောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် .. A Wizard of Earthsea, The Tomb of Atuan, The Farthest Shore နောက်ပြီး Tehanu စတဲ့ ပုံပြင်အတိုလေးတွေကိုပေါင်းစည်းပြီး Tales From EarthSea လို့နာမည်တပ်ထားရတာပါ.. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Arren ဆိုတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ အဖေက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်
. Arren မှာသူ့ စိတ်ကထင်နေတဲ့ အကြောက်တရားရှိပါတယ်.. အဲ့အကြောက်တရားက သူ့ ရဲ့ ပုံရိပ် ပါပဲ... တစ်နည်းအားဖြင့် သူ့ ရဲ့စိတ်ကထင်တဲ့သူနဲ့ပုံစံတူပုံရိပ်တစ်ခုပါ အဲ့ဒိ ပုံရိပ်လေး က သူ့ ကိုကူညီချင်ပေမဲ့ သူက သူ့ ရဲ့ ပုံရိပ်လေးကိုမြင်တိုင်း ကြောက်ပြီးထွက်ပေးနေတတ်ပါတယ်. နောက်ပြီးသူ့ မှာ အကြောက်တရား တွေဖုံးပြီးအသိစိတ်လွတ်သွားတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်.. အဲ့ အသိစိတ်လွတ်သွားတဲ့တစ်နေ့က သူ့ ရဲ့အဖေကို ပြန်သတ်ပြီး သူ့ အဖေဆီက ဓားကိုခိုးပြီးအိမ်ကထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ် ဓားကပုံမှန်ရိုးရိုးဓားမဟူတ်ပါဘူး ​မှော်​အတတ်​နဲ့စီမံထားတဲ့ ဓားပါ Arren တို့မျိုးရိုးကသာ ဓားကို ဓားအိမ်​ထဲကထုတ်နိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. သူထွက်ပြေးရင်းနဲ့ မြေခွေးတွေလိုက်လို့အမြန်ပြေးခဲ့ရပါတယ် အဲ့မှာ Sparrowhawk ဆိုတဲ့ wizard ကသူ့ ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်.. Sparrowhawk က Archmage Wizard ဖြစ်ပါတယ် Archmage ဆိုတာ အဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ မှော်ဆရာတွေထဲမှာ အတော်ဆုံးလို့ဆိုလိုပါတယ်.. Arren ကိုသူနဲ့လိုက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီး Hort မြို့တော်ကို ဆက်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒိမြို့မှာ Therru ဆိူတဲ့ကောင်မလေးကို
ရန်သူတွေက ကျွန်အဖြစ်ဖမ်းနေတာတွေ့ လို့ Arren ကသွားကူညီခဲ့ပါတယ် Therru ဟာ
witch တစ်ယောက်ပါ... အဲ့တာကို Arren ကမသိခဲ့ပါဘူး. နောက်တော့ Arren က သူ့ ကိုကယ်ပြီး ငှါးထားတဲ့ Hotel ကိုမပြန်တတ်လို့ အဲ့နားကလှေကားနားမှာအိပ်နေခဲ့ပါတယ် အိပ်နေရင်းပဲ သူ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်ဖမ်းသမားတွေက ဖမ်းသွားပြန်ပါတယ် သ့း ကိုဖမ်းသွားတဲ့ လမ်းမှာပဲ Sparrowhawk ပြန်ကယ်တင်ခဲ့ပါလေရော... အဲ့လိုနဲ့ Sparrowhawk ရဲ့သူငယ်ချင်း Tenar တို့အိမ်မှာတည်းခဲ့ပါတယ် နောက်တစ်နေ့ Sparrowhawk မရှိတဲ့နေ့မှာ Arren က သူက Tenar တို့ကို ဒုက္ခပေးနေတယ်ထင်လို့ထွက်သွားပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Tenar ကို Lord Cob ကဖမ်းခေါ်သွားပါတယ် Arren ကသူ့ ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးရင်း Lord Cob ကဖမ်းသွားပြန်ပါရော.. Sparrowhawk လိူ့ကယ်တင်ဖို့သွားရင်းမှော်စွမ်းအားအလုံအလောက်မရှိလို့ အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်.. အဲ့မှာ Therru ဟာ Arren ကို သူ့ ရဲ့ ဓားပြန်ပေးရင်း Lord cob နဲ့ တိုက်ကာ ဘယ်လိူဆက်ဖြစ်လာမလဲ.. Sparrowhawk သေမလားဆိူတာ ကြည့်ရှုခံစားကြရအောင်ဗျာ....
Credit To : www.goldchannelmovies.com Review & Translate by: Thura Tun
Quality -720P Br-Rip
Watch And Download Direct Link (700MB) Posted by